Motivation - Pejy fandokoana maimaimpoana ho an'ny ankizy
Keyword: antony manosika
Tapitra ny 10 andro voalohany tamin'ity taona ity, rava ny hazo krismasy, nifanakalo ny fanomezana ary hadino ny fanapahan-kevitra tsara - izany no manomboka ny taona vaovao
Fa miandry kely! Ary ahoana ny amin'ireo fanapahan-kevitra tsara noraisintsika, ny drafitra hataontsika amin'ny taona vaovao? Fa maninona no hadino indray izy ireo ary nofaoka tao ambanin'ny karipetra?
Ahoana ny fomba hampiharana ny fikasana tsara - Sarin'i Fee73 ao amin'ny Pixabay
Azo antoka fa tsy diso izy ireo! Nametraka torohevitra vitsivitsy ho anao izahay mba hahafahan'ny fikasana tsara hampiharina hatrany.
Ny kilasika eo amin'ireo fanapahan-kevitra
Ho an'ny taona manaraka dia te hihinana salama kokoa aho, manao fanatanjahan-tena bebe kokoa ary tsy mihinana zava-mamy firy.
Ary hatsahatro ny fifohana sigara manomboka amin'ny XNUMX Janoary ary mikasa ny hamolavola endrika ny trano aho. Raha ny marina, hampihariko amin'ny farany ny tetikasako vaovao izay tena tiako hatao taona maro lasa izay, mila asa vaovao aho, tena te hanana fotoana bebe kokoa ho an'ny fianakaviana.
Oh eny, ary manomboka amin'ny volana Janoary dia hisy ny tahiry ary tsy vola be loatra no lany amin'ny zavatra tsy ilaina ... Toa izany ve ny fikasanao tsara tamin'ny taona vaovao? "Ka ny finiavana tsara dia tsy fanapahan-kevitra fotsiny!" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 11. Janoary 2021 8. Janoary 2021 Sokajy Fiaraha-miasa & izahoKeywords fikirizana, mihinana salama kokoa, fanapahan-kevitra tsara, hanao fanatanjahan-tena bebe kokoa, antony manosika, taona vaovao, TOLO-KEVITRA, Fanapahan-kevitra ho an'ny Taom-baovao, aza mihinana zava-mamyFanamarihana 1 ka Ny fikasana tsara dia tsy fikasana fotsiny!